Kuziva sei mazuva akataurwa? Tsvaga kuti wakashanda makore mangani | Ehupfumi Zvemari
Kuziva sei mazuva akakwidziridzwa munharaunda kuchengetedzeka?
Susana Maria Urbano Mateos | | Basa, Zvirongwa zvepenjeni
Kuti uzive iyo makore emipiro yekuchengetedzwa kwevanhu, chinhu chakakosha kuziva kuti mutengo chii uye nzira yacho mairi yemunhu wega wega kunyanya. Usati watanga kuziva kuti chii icho mupensheni unobatsira kuti inofanirwa kubata munhu wega wega, iwe unofanirwa kuziva kuti hushoma kuti ukwanise kupa iyo pension makore gumi nemashanu; ndiko kuti, munhu wacho anofanira kunge anga ariwo zvake Makore gumi nemashanu ehupenyu hwake achishingairira kupa kuchengetedzeka munharaunda.
Iwe unofanirwa zvakare kuve neanenge maviri emakore apfuura 15 makore akanyorwa mumakore ipapo pamberi penguva ye kumbira kuenda pamudyandigere. Isu tinofanirwa zvakare kufunga nezve chikamu cheiyo mutemo wekutanga yatinayo zvinoenderana negore ratiri. Izvi zvinoenderana nenhamba yemakore emipiro.
Kusvikira 2019, huwandu hushoma hwemakore Iyo inofanirwa kuverengerwa makore makumi matatu nemashanu nemwedzi mitanhatu
Ye 2020 uye kusvika 2022 zvinofungidzirwa kuti huwandu hwemakore emipiro uchave makumi matatu nematanhatu
Kwemakumi maviri nemakumi maviri nemakumi maviri nemakumi maviri nenomwe kusvika makore makumi maviri nenomwe, iwo makore makore makumi matatu nematanhatu
Na2027, huwandu hwemakore huchave makore makumi matatu nemanomwe
Mune mamwe mazwi, sekufamba kwemakore, huwandu hwemakore emipiro yekukwanisa kuwana 100% yemudyandigere icharamba ichikwira.
1 Tine mazuva mangani ataurwa atinawo?
2 Kuziva sei mazuva akapirwa kuSocial Security
2.1 Kurudziro yekukumbira makore yakapa kuSocial Security
3 Pamusoro pemakore ekupa, zvakakoshawo kuti uzive imwe data
4 Kana chero data risiri iro, ndinofanira kuitei?
5 Kuziva sei mazuva akataurwa kukumbira mabhenefiti
6 Pane mabasa asina kunyorwa here?
7 Kukosha kwemushumo wehupenyu hwebasa
8 Maverengero andaiita hupenyu hwangu hwebasa kuti ndizive mazuva akataurwa
Tine mazuva mangani ataurwa atinawo?
Hongu, makore mashoma apfuura BBVA yakagadzira ongororo umo chikamu chikuru chevanhu chakabvunzwa kana vainyatsoziva kuti vangani vanga yakanyorwa mukuchengetedzwa kwevanhu uye yaive marii yekufungidzira yavaizobhadhara kana kumbira kuenda pamudyandigere.
Vazhinji vevanhu vakati ivo vainyatsoziva kuti yaive nhamba yemakore yavakanyoraNekudaro, kana zvasvika pakuziva kuti vaizochaja riinhi, anenge hapana aiziva kupindura kuti imarii yavanofanira kubhadhara. Pamusoro peizvozvo, paive nenhamba huru yevanhu vane mupiro waive uri pasi pegumi nemashanu emakore; kunyangwe iyo zera revanhu raive rakakura kupfuura makore makumi mana nemana.
Kuziva sei mazuva akapirwa kuSocial Security
Ziva mazuva atakatora Izvo zvakakosha kuti tizive kuti yakawanda sei yatinofanira kutora, inofanirwa kutariswa kuti kuchengetedzeka kwevanhu kunotumira pamwedzi data rese riri kuvandudzwa semushandirapamwe wekubatsira vashandi.
Pamusoro peiyi sarudzo, iwe une zvimwe zvakawanda sesimba tumira chikumbiro kuburikidza neinternet, sei kutumira chikumbiro kune chengetedzo yemagariro kuburikidza nepuratifomu. Kuti uite izvi, unofanirwa pinda papuratifomu uye bvunza rako rehupenyu revhoti iro iro makore emipiro anozoonekwa.
Iwe uchafanirwa kuisa yako ruzivo rwemunhu senge zita rako nesurname uye yako nhengo yenhengo, pamwe neemail uye nhamba yekuzivisa.
Pazasi chete, uchafanirwa kuisa rese data rine chekuita nekero yako uyezve, unofanira kudzvanya kubvuma.
Panguva iyoyo, iyo data ichatumirwa kuitira kuti iwe ugone kukumbira hupenyu hwako hwebasa.
Kurudziro yekukumbira makore yakapa kuSocial Security
Iwe unofanirwa kuzadza minda yese yakamirirwa neasterisk, sezvo izvi zvichidikanwa.
Kana iri nzira yeruzhinji uye iwe usina, unofanirwa kuisa 0
Iwe unofanirwa kuisa iyo data rese mukati mechikumbiro pasina chero mataurirwo. Izvo hazvina basa kuti iwe une zvisirizvo zvawo
In the Rudzi rwechitupa, nhamba yekuzivisa inofanirwa kuverengerwa pamwe nemavara; zvisinei, hazvidikanwe kusanganisira mahedheni kana nzvimbo kana uchiisa.
Sarudzo yechipiri ndeyekukumbira kuburikidza nenhamba yefoni yaunowana pane peji rekuchengetedza: 901 106570. Nekukumbira mushumo pano, unosvika wakananga kumba kwako uri mutsamba.
Kana iwe uine chitupa chedigital, unogona kuchikanda online muPDF. Iyi kurodha inogona kuitwa nekukasira uye chete rumwe ruzivo runofanirwa kuzadzwa mukati.
Chekupedzisira, zvinogona kuitwa kurodha pasi data pamusoro peinternet mushure mekuchengetedzwa kwenzanga kunotipa mukana wekuwana data redu tichishandisa password muSMS. Rudzi rwemaitiro irworwo rwunokurumidza, zvisinei, kuti upedze nhanho dzese, hofisi yemari inofanirwa kunge iine yako yakavandudzwa nhamba yefoni.
Pamusoro pemakore ekupa, zvakakoshawo kuti uzive imwe data
Sezvatakambotaura pakutanga, pamusoro pekuziva huwandu hwemazuva atakapa, zvakakosha kuti isu tizivewo rumwe ruzivo kuti tikwanise kuwana yedu yekurega basa munguva yakatarwa. Aya ma data haangoshanda chete kuti tigone kuziva kuti ndeupi mubatiro watinowana, asi kuitira kuti tizive kana paine kushaikwa kwemabasa, ndeapi mabhenefiti atingave nawo mwedzi nemwedzi.
Kana chero data risiri iro, ndinofanira kuitei?
Kana iwe ukaona kuti chero ripi zvaro re data pane rekuchengetedzeka peji risiri iro rakarurama, rinotevera danho nderekushandura iyo yakati data kubva kuprofile yako. Nekudaro, chichava chengetedzo yemagariro kuti mushure mekuona kwako kururamisa, unofunga kana iri chaiyo mhando chaiyo yeruzivo.
Kuziva sei mazuva akataurwa kukumbira mabhenefiti
Kusiyana nekurega basa, kwe kukwanisa kukumbira kushayikwa kwemabasa unofanira kuverenga mazuva akataurwa uye unofanirwa kunge uine mazuva makumi matatu nemakumi matatu akatorwa
Kana iwe usina kukwanisa kusvika pamari iyi, chaunogona kukumbira rubatsiro diki kune "kupererwa nebasa”Asi mune ino kesi, kuchengetedzeka kwevanhu hakusungirwe kukupa iwe.
Kune urwu rwechipiri rubatsiro, iwe unofanirwa kuve uine mipiro kweanenge mazuva makumi mapfumbamwe kana uine mhuri yakatarisana kana mazuva zana nemakumi masere kana uchinge usina.
Pane mabasa asina kunyorwa here?
Ehe, kune mamwe mabasa asina kunyorwa uye nekudaro hapana rubatsiro runogona kuwanikwa. Aya mabasa ndevashandi vepamba kana vanhu vanoshandirwa, ndiko kuti, vanozvishandira. Kunyangwe kana paine kushaya mabasa kwevanoshanda mahara, ine mimwe mitemo inofanirwa kuvharwa kuitira kuti iwanikwe uye inonzi "kumiswa kwebasa rekupa".
Ikozvino, isu tinoda kujekesa yakakosha poindi, mazuva ekupira anoshandiswa kune ese ari pamudyandigere uye mabhenefiti, saka zvakakosha kwazvo kuti uzive zvese, zvisinei, zvinogona kushandiswa zvakasiyana. Ndokunge, nepo mazuva akapihwa kana achinge achishandisirwa kubhadhara kana rumwe rudzi rwebhenefiti, mazuva akapihwa pamudyandigere anoverengerwa mumakore uye aya haashandiswi, kureva kuti, iwo anoungana muhupenyu hwako hwese.
Muzviitiko zvese izvi, zvakakosha kuti uzive kuti huwandu hwamakore hwauinahwo ndehwupi.
Kukosha kwemushumo wehupenyu hwebasa
Vazhinji vashandi vane yavo kushanda hupenyu RIPOTA kuitira kuti uzive mazuva avakatotora kare. Iyi pasina mubvunzo ndiyo yakanakisa sarudzo uye iyo yatakakurudzira kwauri kumusoro; Nekudaro, iwe unofanirwa kuve uine rese data pabepa kuitira kuti kana paine kukundikana mu data rako, unogona kutora kana kushandura chero mhando yeruzivo mune rako rebasa rehupenyu mushumo. Yese data yaunowana pano inofungidzirwa uye muzviitiko zvakawanda, data rinogona kunge risipo kana huwandu hwacho haukwane 100%.
Gwaro rebasa rinofanira kugara richitorwa nenzira inoratidza kuti munhu wega wega anogona kuwana fungidziro isingawirirane ne100% nguva dzose, asi iri padyo nepadhuze nezvatinoda kuziva.
Kunyangwe zvakadaro, iyo kuverenga chaiko kwemazuva akanyorwa, Inofanira kugara ichiitwa kuburikidza nebasa reruzhinji nechikumbiro chekubatsirwa kana rubatsiro uye nedata rese chairo pabepa kuitira kuti iwe ugone kuverenga chaiko nemaoko chero nguva.
Maverengero andaiita hupenyu hwangu hwebasa kuti ndizive mazuva akataurwa
Paunenge uchinge uine hupenyu hwekushanda, iwe unofanirwa kugona kuzvidudzira nenzira kwayo. Rondedzero yehupenyu hwebasa yakakamurwa muzvikamu zvinoverengeka munowanikwa data yemunhu mumwe nemumwe uye nhamba yekuchengetedzwa kwevanhu (ita shuwa kuti ndizvo). Iwe unogona zvakare kutarisa kuti chii chinonzi nhamba yemazuva ataurwa munzvimbo iyo inoti "yakanyoreswa musocial security system kwe" x "mazuva.
Pazasi peiyi data, iwe unowana nguva dzese dzawakazvipa iwe yakakwirira uye yakaderera mukuchengetedzeka kwevanhu, ine musi weumwe neumwe uye mazita emakambani.
Kana iwe ukaona kuti chero ruzivo rwusipo, unogona kukumbira shanduko yaro, asi iwe unofanirwa kunge uine mapepa anoratidza kuti wakanyatsoshanda munzvimbo isipo nekutumira magwaro akaongororwa, kuitira kuti kuchengetedzeka kwenzvimbo kuisanganisira.
Uye, iwe unoziva kuti mangani makore iwe aunofanirwa kupa kuti utore hushoma hwepenjeni? Dzvanya apa:
Makore mangani aunofanirwa kupa kuti utore hushoma hwepenjeni?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Kuziva sei mazuva akakwidziridzwa munharaunda kuchengetedzeka?
Jose Vicente Pinilla akadaro
Nguva pfupi yapfuura ndakaedza kutsvaga pamhepo makore angu emipiro kuSS (Hupenyu hweVashandi) neDhijitari yangu Chitupa uye handina kuiwana uye nhasi mubhuku rako rakanaka uye jiffy ndichidzvanya pa "pinda muchikuva" "Ini unotova nazvo! Ndatenda zvikuru Susana.
Pindura José Vicente Pinilla
TOMAS FERNANDEZ CARRETERO akadaro
NDAKATADZA MAZUVA AMANGANI
Pindura TOMAS FERNANDEZ CARRETERO
felix vasco jimenez akadaro
Ndinoda kuziva kuti mangani makore andakanyorwa, zita rangu ndinonzi felix vasco jimenez 75669356t
Pindura kuna felix vasco jimenez
magdalena segarra kutengesa akadaro
Maitiro ekuverenga uye ndeapi mashandiro andinofanira kuita kuti ndiverenge mazuva angu akanyorwa ari (maawa x 8 akapatsanurwa x ????) Kuvhiya kuri sei? Ndatenda
Pindura magdalena segarra kutengesa
Maria Eugenia Laba akadaro
Mhoro, nemazuva 1055 emipiro, ndokuti, makore maviri, mwedzi gumi, nemazuva makumi maviri nerimwe, penjeni yangu yakawanda sei?
Pindura María Eugenia Laba
Mari ngirozi akadaro
Ndinoda kuziva zvandaburitsa uye zvandinogona kuchengeta kubvira ini ndine makore makumi mashanu nemasere uye makore mashoma ndakatora email yangu kupindura mangeles.marquez@dkvintegralia.org muchas gracias
Pindura Mari ngirozi
Kuregererwa kwemitero kuSpain
Sunga mabhande ako epachigaro: kusagadzikana kunodzokera kumisika